iFixit inotanga kubvarura iyo 24-inch iMac | Ndinobva mac
iFixit inotanga kubvarura 24-inch iMac
Vari kutotora. Chishanu chapfuura chekutanga 24-inch iMac, uye zvingave sei zvisina kudaro, nezuro vakomana vanobva kuFixit vakaisa iyo screwdriver mune imwe yacho.
Isu tinongova nemaonero ekutanga, nekuti maitiro ese achatora mazuva akati wandei ebasa. Vakatiratidza mifananidzo kuburikidza ne X-ray, uye zvakawanikwa pasi pechitunha. Musodzi unovimbisa, zvirokwazvo.
Sezvatakaratidza kare, neChishanu chapfuura kutumira kwekutanga kubva kuApple yeiyo nyowani uye yakajeka 24-inch iMac yeiyo nyowani Apple Silicon nguva yakatanga kusvika kwavari kuenda. Uye nezuro Muvhuro chikwata chavo chakasvika kune vakomana ve iFixit. Saka havana kutora nguva kuti vaise maoko avo pazviri.
Yepakati-yeyero yepepuru iMac ine 8-musimboti CPU, iyo 8-musimboti GPU uye 8 GB ye RAM. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ivo vekunze veiyi modhi vakasiyana kubva kune vekunze kweiyo base modhi ine 7-musimboti GPU, sezvo michina miviri iine akasiyana masisitimu anotonhora.
Iyo base iMac ine imwechete inotonhora fan uye heatsink, nepo yepamusoro-kumagumo 8-musimboti maGPU mamodheru ane mafeni maviri uye pombi yekupisa pamwe chete nemidziyo yekupisa, saka mukati mechinhu chakabvarurwa chakasiyana neMac ine 7-core GPU.
X-ray uye casing disassembly
iFixit inogara ichitora maX-ray isati yabvarura mudziyo.
Disassembly inotanga ne bhonzo scan Yakatsanangurwa, uye X-ray zvinyorwa zvinogara zvichinakidza kutarisa nekuti zvinotipa tarisiro yezvinhu zvemukati tisati tavhura muchina. Iko kune maviri makuru esimbi mahwendefa mukati uye iyo RF inopfuura-kuburikidza yeiyo antenna Hardware mune Apple logo
Iyo iMac yakavharidzirwa neizvo iFixit inoti "classic iMac adhesive", isingadhuri kubvisa kubva pane inonamirwa neApple kune mamwe madivayiri senge iyo iPad.
Sezvo kumberi kweMac kuri chidimbu chimwe chegirazi, hapana chemberi chikamu chin chin chinodzivisa kupinda kune zvemukati zvikamu semumaenzaniso apfuura Iyo yepasi inogara mamaboardboard, uye kune mafeni maviri anovhuvhuta mukati. Pombi yemhangura yekupisa uye maviri mashoma ekupisa anonyudza iyo M1.
iFixit yakadzama mamaboardboard zvinhu, kusanganisira ndangariro SK Hynix, flash yekuchengetera Kioxia NAND uye Apple-yakagadzirirwa M1 SoC, module yeBluetooth / WiFi, uye manejimendi emagetsi IC, pakati pezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana.
Pane "chakavanzika bhatani»Nema LED matatu pasi, ayo auchazoongorora kuti ndeyei. iFixit inoronga zvakare kugovana Mashiripiti Khibhodi Kubata ID sensor ruzivo, mutauri ruzivo, uye gadziriso yekugadzirisa.
Iyo iFixit teardown haizopedziswe kusvika mangwana, asi kana uine zvakawanda zvekufarira, unogona kuzvitevera zvakananga pawebhusaiti ye iFixit, iyo ichavandudzwa sekuwedzera kusarudzika kunowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » iFixit inotanga kubvarura 24-inch iMac
Maitiro ekuwedzera iyo timer kune HomePod
Apple haichazivi ku "hook" vatengi veApple Arcade uye inopa gore rebasa